Gawaarida Tünektepe Cute iyo Xarumaha Bulshada 7 Marti geliyayaal 260 kun oo Booqdeyaal Bil ah | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaTünektepe Teleferik iyo Xarumaha Bulshada 7 oo ay martigelisay 260 Kumanaan Booqdayaasha
13 / 08 / 2018 07 Antalya, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Tünektepe, oo ay dib ugu soo noolaysay Dawladda Hoose ee Magaalaweynta Antalya, ayaa wali kasii helaysa adeegyada ay bixiso. Tünektepe Teleferik iyo Xarumaha Bulshada waxay bilaabeen inay siiyaan quraac u gaar ah faafinta dadka Antalya.
Gawaarida Tünektepe Cable Car iyo Xarumaha Bulshada oo ay furtay Dowlada Hoose ee Magaaladda iyadoo ujeedku yahay 'Cagahaaga ayaa laga goyn doonaa dhulka' ayaa weli ah soo jiidashada xiisaha badan. Martida booqda shirarka ee adeega gawaarida fiilada, waxay ku raaxeystaan ​​ku faafida quraacda 605 altitude Tünektepe, oo ay weheliso muuqaalka weyn ee Antalya halkaasoo ay ku daawadaan indhaha shimbirta.
Qiimaha la awoodi karo - Menu hodanka ah
Gawaarida Tünektepe Cable Car iyo Xarumaha Bulshada ayaa martigaliyay 2018 kun oo booqdeyaal ah bishii ugu horreysay ee 7 ee 260. Tünektepe, oo noqotay xarun lagu noolaado oo booqdayaashu waqti ku qaataan, iyagoo waliba ku raaxeysanaya, ayaa sidoo kale soo jiidasho leh adeegga quraacda. Tünektepe, halkaas oo quraacda faafinta gaarka ah ee loogu adeego aragti qaali ah laga helayo qiimaha TL 20 qofkiiba, waxaa sidoo kale laga sameeyaa timaha, gogosha iyo lakabyada tahini. Martida waxay kaloo dalban karaan saxan quraac hodan ah.
Xarumaha Bulshada ee Tünektepe Ma jiraan
Xarumaha bulshada ee Tünektepe, oo ay maamusho shirkadda Antalya Metropolitan Municipality ee ANET AŞ, ayaa noqotay mid ka mid ah astaamaha sumadda Antalya. Muwaadiniinta doonaya inay arkaan muuqaalka weyn ee 15 rodolkiiba hal mitir 605 mitir Tünektepe'ye 9 baabuurka fiilada gaaban waqti gaaban ayey gartaa. Martidu waxay ka faa'iideysan karaan Pizza, baastada, saladh, hilibka kubbadda cagta iyo hilibka hamburger ee makhaayadda weyn ee ku dhex taal Xarunta Bulshada. Qeybaha cabitaanada ee koonfurta Terrace waxay bixiyaan liistooyin hodan ah oo jalaato, galley caano, baraf iyo kafee adduunka oo dhan.